Madaxweyne Farmaajo oo si heersare loogu soo dhaweeyay madaxtooyada Kenya (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo si heersare loogu soo dhaweeyay madaxtooyada Kenya (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa maanta xarunta madaxtooyada dalkaasi kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweyn aan caadi ahayn loogu sameeyay xarunta madaxtooyada Kenya, wuxuuna salaan sharaf ka qaatay ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada.
Waxaa madaxweyne Farmaajo xarunta madaxtooyada Kenya kusoo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenaytta, iyadoona sidoo kale loo riday illaa 21 madfac oo soo dhaweyn ah islamarkaana loo garaacay heesta calanka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweyntaasi kadib kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalkaasi Kenya Uhuru Kenaytta, waxayna labada dhinac kawada hadleen arimo dhowr ah ay ka mid yhin xoojinta xariirka labada dal iyo la dagaalanka Al-shabaab.
Dhinaca kale, warar hordhac ah oo ay heleyno warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in labada madaxweyne la filaayo inay kala saxiixdaan heshiisyo kala duwan, waxayna kulankooda kadib si wadajir ah ula hadli doonaan warbaahinta, si ay u faah-faahiyaan wixii ay kawada hadleen kuna heshiiyeen.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa dalka Kenya ku sugnaan doonno muddo seddax maalmood ah, wuxuuna ka qeyb gali doonnaa shir madaxeedka IGAD oo furman doonno 25-ka bishaan Febraayo.